China China Manufacturer Price Auto Engine Car Oil Filter YeToyota Lexus Nissan Honda Isuzu Mitsubishi Subaru Hyundai Kia Chevrolet fekitari uye vagadziri | Chuangqi
China Mugadziri Mutengo Auto Injini Mota Oiri Sefa YeToyota Lexus Nissan Honda Isuzu Mitsubishi Subaru Hyundai Kia Chevrolet
Yakakwira kuyerera firita yakagadzirirwa kugadzirisa mashandiro
Yakagadzirirwa mafuta ekugadzira uye akajairwa
Premium filtration midhiya yekuwedzera chinzvimbo
Inopa yakasarudzika kusefa
Chinhu China Mugadziri Mutengo Auto Injini Mota Oiri Sefa YeToyota Lexus Nissan Honda Isuzu Mitsubishi Subaru Hyundai Kia Chevrolet
Kutumirwa kuratidza, mhepo, gungwa
Mashoko Plastiki, Pepa, Simbi
Mharidzo 1-2 pcs inokwanisika
Zvakanakira 1.Excellent mhando, Yakajairika kushanda 1 gore kana 30,000km garandi.
2.Fast dhirivhari, 15-30 Mazuva.
3.Produce yemafuta mafirita, mafirita mafirita, mhepo mafirita, nezvimwewo zvese mota nemarori.
4.Reasonable mutengo uye pamusoro yepamusoro.
OIL FILTER - Yakakwira mhando, Yekutanga Midziyo Yekutsiva Chikamu, Direct Fit Chengetedza mota yako ichimhanya zvakanaka neiyi Oiri Sefa. Iyo inoratidzira anti-drain kumashure mavhavha kubatsira kudzivirira kuoma kutanga. Sefa yemafuta iyi inokurudzirwa neFord Motor Company yeinjini yedhiziri.
Mafirita emafuta eConqi akagadzirirwa kusangana kana kudarika zvinodikanwa zveOEM, uye akaedzwa zvakaomarara kuti zvioneke, kugona, uye kuputika kwesimba. Kugadzikana kwekuvaka, yakakwira-kuyerera firita midhiya, uye 1-Year Yakatemerwa garandi inogadzira Conqi mafirita sarudzo yepamusoro-soro kune vatyairi vane pfungwa dzekuita.
Conqi Performance sirivha Oiri Mafirita akave akagadzirirwa zvakanyanya kune vanoisa installers uye vanopa masevhisi. Yadzo yakakwira kuyerera dhizaini inogona kubatsira kuvandudza mashandiro enjini nekudzora oiri firita. Yedu Performance sirivheri Oiri Sefa ane akariputira gaba chimiro kuitira kuti vabviswe neyakajairwa mafuta firita wrench inowanzo kuwanikwa kune vekutengesa installers. Aya maFirita eSirivha emafuta mafirita anopa yakasarudzika kusefa uye injini inodzivirira mukati mehupenyu hwavo hwebasa. Ivo vakagadzirwa kubata ese mamakisi ekugadzirwa, akajairwa uye akasanganiswa mota emafuta. Midhiya yakakwenenzverwa inopa hukuru hwepamusoro ichivaita kuti vakodzere kuwedzeredzwa nguva dzekuchinja kwemafuta kana ichishandiswa zvinoenderana nemotokari uye injini dzemafuta ekurudzira. Conqi Performance Sirivha Oiri Mafirita anowanikwa kune canister uye katuriji yemhando yemafuta mafirita ekushandisa.
1. Chero mibvunzo ichapindurwa mukati me24hours, isu takafungidzirwa mumafuta / mhepo / cabini / mafuta mafirita kweanopfuura makore gumi nemaviri.
2. Nyanzvi yekutengesa mafuta firita, mweya firita, kabhini firita uye mafuta firita.
3. OEM inowanikwa:
1) Yakasarudzika logo kana ruvara bhokisi
2) Chero zano remafirita emota, ingotiudza iyo nhamba yeOEM, tinogona kugona kuzadzisa uye kuiisa mukugadzira
4. Yakakwira mhando, yemakwikwi mutengo.
5. Mushure mekutengesa sevhisi:
1) Zvese zvigadzirwa zvinoenda kuburikidza neyakaomarara mhando cheki mufekitori yedu usati warongedza, isu takaona QC timu iri mukutarisira kwekutarisa kwemhando isati yatumirwa.
2) Zvese zvigadzirwa zvichave zvakarongedzwa zvakanaka pamberi pekutumira.
6. Kukurumidza kuendesa.
Pashure: mafuta firita yeHONDA ACCORD oiri mafirita emagetsi OEM 15400-PLC-004 Uchishandisa HONDA
Zvadaro: yakakwira yekumanikidza mota kubatanidza silicone rabha hosi
Auto Chikamu Mafuta Sefa
Mafuta Sefa Yemota
Mafuta Sefa Mutengo
Mafuta Filter Anopa
Kutsiva Oiri Sefa
Toyota Hilux Mafuta Sefa
Toyota Oiri Sefa